लन्डनमा मनाइयो बुद्ध जयन्ती- कला - कान्तिपुर समाचार
लन्डन — लन्डनको मुटु ट्राफलगर स्क्वायर अचेल ब्रेक्जिट विरोध अनि समर्थन र्यालीले भरिरहन्छ । प्रदर्शनकारीले बेलायत र ईयूका झण्डा फहराइरहने उक्त स्थान आइतबार साँझ भने नेपाली झण्डा, ध्वजा पतका र बुद्धका पोस्टरले भरियो ।
नेपाली गीत संगीत घन्किए अनि मौलिक नेपाली नाचमा कलाकारले विदेशीको ध्यान खिचे । भैरव, लाखे नाच देखि कुमारी परम्पराको एउटा प्रदर्शन विदेशी आकर्षित गर्ने थप आइटम थिए । फूलको आँखामा, रेशम फिरिरी... पनि घन्किए त्यहाँ ।
अवसर थियो बुद्धजयन्ती । बुद्ध फाउण्डेसन यूके र कपिलवस्तु समाज यूकेले लन्डनस्थित नेपाली दूतावास, नेपाल पर्यटन बोर्ड र गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायत लगायतको सहकार्यमा बुद्धजयन्ती मनाएका हुन् ।
'जहाँ छन् बुद्धका आँखा...' गायिका शर्मिला बर्देवाको सुमधुर स्वरले माहोल एकाएक तात्यो । बर्देवासहित शर्मिला सिंह र सोनम उनेमको अर्को गीत 'यो नेपाली शीर उचाली...' ले एकपटक फेरि विदेशी भूमिमा नेपाली भावना जागृत गराएको महशुस दर्शकले गरे ।
करिब ५ सय हाराहारी नेपाली र केही विदेशी सहभागी उक्त कार्यक्रममा धार्मिक पूजा, शान्तिदीप प्रज्वलन, गौतम बुद्ध र लुम्बिनीसम्बन्धी प्रिजेन्टेसन साथै पर्यटनप्रवर्धनात्मक कार्यक्रम गरियो ।
समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा हृदयरत्न बज्राचार्यले भगवान बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीबाट शान्ति, अहिंसा र मैत्रीको संदेश लिएर आफू बेलायत आएको बताए।
उनले सन् २००४ मा स्थापित विश्वविद्यालयले विश्व शान्ति, सामन्जस्य र बुद्धको संदेशको प्राज्ञिक प्रवर्धनका लागि काम गरिरहेको बताए। उनले अक्सफोर्ड लगायत बेलायतका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा बौद्ध धर्म र दर्शनका विषयमा पढाई भैरहेको थाहा पाउंदा आफूलाई खुसी लागेको बताउंदै ती विश्वविद्यालयहरुसंग सहकार्य गर्न आफुहरु तयार रहेको पनि बताए।
आफ्नो स्वागत मन्तव्यमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले गौतम बुद्धको जन्म नेपालमै भएको हो भन्ने विषयमा अब कुनै शंका नरहेको बताउंदै लुम्बिनीको योजनावद्ध विकासका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले सघांउदै आएको जनाए।
उनले युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनीलाई विश्वकै शान्ति, अहिंसा र सहअस्तित्वको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न नेपाल सरकारले काम गरिरहेको जनाए। उनले आउंदो वर्ष बेलायतबाट एक लाख पर्यटकहरु भित्राएर नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्न आव्हान पनि गरे।
लुम्बिनी क्षेत्रमा पुरातात्विक खोज गरेका ब्रिटेनको डरहम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रबिन कनिङ्गघमले आज भन्दा १२३ वर्ष अघि सन् १८९६ मा जनरल खड्ग शमशेर तथा एलोइस एन्टन फुहररले नेतृत्व गरेको टोलीले लुम्बिनीमा सम्राट अशोकले गाडेको अशोक स्तम्भ पत्ता लगाएको बताए।
प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ २१:३७
अन्तरजातीय बिहेपछि मुसहर समुदायले पानी पाएन
धाकधम्की दिने क्रम नरोकिएपछि केटाका बुबाआमाले घर छाडे
वैशाख ३०, २०७६ बिनु तिम्सिना
विराटनगर — मोरङ बूढीगंगा गाउँपालिका २, सख्मा टोलमा ऋषिदेव -मुसहर) समुदाय र थापा परिवारबीच सुमधुर सम्बन्ध थियो । घरमा आउजाउ चल्थ्यो । समस्या पर्दा एकअर्कालाई सहयोग गर्थे । एक महिनायता भने ठीक उल्टो छ । आपसमा दुस्मनी छ । झडप भएको छ । यसको कारक हो, सनी ऋषिदेव र सिर्जना थापामगरले भागी बिहे गर्नु ।
मोरङ, बुढिगंगाको ऋषिदेव समुदायले खानेपानीबाट वञ्चित गराएको भन्दै उजुरी गरेपछि सोमबार इलाका प्रहरी कार्यालय नेमुवामा छलफल गरिँदै । तस्बिरः विनु/कान्तिपुर
सनी र सिर्जनाबीच प्रेमसम्बन्ध रहेको हल्ला पहिलेदेखि नै थियो । एसईई परीक्षा सकिएकै दिन चैत १८ मा दुवैले गाउँ छाडे, सम्पर्कविहीन भए । लगत्तै थापा परिवारले छोरी फिर्ता ल्याउन भन्दै धम्क्याउन थाल्यो ।
थापा परिवारले ऋषिदेव बस्तीमा रहेको खानेपानीको सामूहिक टयुबवेल उखेलेर फालिदियो । नयाँ टयुबवेल नगाड्न पनि धम्क्याइयो । अहिले ऋषिदेव समुदाय पिउने पानीका लागि गुहार माग्दै हिँडिरहेका छन् । कुटपिट गर्ने र धाकधम्की दिने क्रम नरोकिएपछि सनीका बाबु ठाकुर र आमा सुगावती ऋषिदेवले घर छाडेका छन् । छोरा खोज्न भनेर उनीहरू हिँडेपछि घर खाली छ ।
थापा परिवारको निजी जमिनमा लगभग १० घर ऋषिदेव समुदायको छाप्रा छन् । उनीहरूका थुप्रै पुस्ता त्यहीँ बसेका थिए । त्यहाँ सनीका आफन्तका चार घर छन् । धेरै वर्षपहिले वडा समितिले गाडिदिएको सार्वजनिक टयुबवेलबाट उनीहरूले पानी पिउँदै आएका थिए । सनी र सिर्जनाको बिहेलाई बहाना बनाएर आफूहरूलाई विस्थापन गर्न खोजिएको मुसहर परिवारको गुनासो छ ।
मुसहर समुदायले अर्काे बस्तीबाट पानी ल्याउने गरेकामा त्यहाँ पनि टयुबवेल बिगि्रएको छ । 'अर्को टयुबवेल गाडा फेरि थापा परिवारका सदस्यले उखेलिदिए । अहिले खानेपानीका लागि हामीले धेरै दुःख पाउनुपरेको छ,' स्थानीय खकरी ऋषिदेवले भनिन् ।
खकरीले पानी खान पाउँ भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन् । 'खानेपानी पनि नपाउने गरी हामिले के अपराध गरेका छौं ? गरिब भन्दैमा हाम्रो खानेपानीको स्रोत नै बन्द गरिदिने ?' उनले भनिन् । बूढीगंगा वार्ड नम्बर २ का अध्यक्ष रेवती नारायण चौधरीका अनुसार थापा परिवारको दबाबमा मुसहरहरूले खुलेर समस्या राख्न डराइरहेका छन् ।
सनी र सिर्जनाले विवाह गरेलगत्तै थापा परिवारले आफ्नो छोरा खोजेर ल्याउन दबाब दिएको सनीका मामा दीपनारायण ऋषिदेवले बताए । 'दुई जनाले भागेर विवाह गरे, अहिले बेपत्ता छन् । हामिलाई भने थापा परिवारको निकै दबाब आइरहेको छ,' उनले भने 'आक्रमण पनि गरे ।' वडा अध्यक्ष चौधरीले पनि मुसहर समुदायमाथि पटकपटक कुटपिट भएको बताए ।
तीन साताअघि झडप हुँदा थापा परिवारका ६ जना र ऋषिदेव परिवारका पाँचजना घाइते भएको स्थानीयले बताए । गाउँमा एक रात छलफल बोलाएर थापा परिवारका घाइतेको उपचार खर्च मुसहर परिवारलाई बेहोर्न लगाइयो । घाइते भएका मुसहर परिवारको न उपचार गरियो न त खर्च नै दिइयो । 'आक्रमण गर्न थापा परिवार आएका थिए । हामीले प्रतिकार मात्र गरेका थियौं । उल्टै हामीलाई १३ हजार रुपैयाँ तिराइयो,' दीपनारायणले भने ।
सोमबार इलाका प्रहरी कार्यालय नेमुवामा छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्किएन । इलाका प्रहरी कार्यालय नेमुवाका प्रहरी नायब निरीक्षक मनोज अधिकारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयले घटना छानबिन गरिरहको जनाउँदै आफूले छलफलको समन्वयमात्र गरेको बताए । मुसहर परिवारले भने प्रहरीले सुरक्षा नदिएको र समयमा उजुरी नसुनेको गुनासो गरेका छन् । 'सानो जातको केटाले मगरकी छोरी भगायो भनेर कुटपिट र पानीको स्रोत बन्द गरिनु गलत छ भनेर मेरै पहलमा प्रहरीमा छलफल बोलाइएको हो,' वडाध्यक्ष चौधरीले भने ।
टयुबवेल आफ्नो जग्गा भएकाले अब राख्न नदिने थापा परिवारको भनाइ छ । 'हामीलाई टयुबवेल हटाएको आरोप लागेको छ तर त्यो सत्य छैन,' सिर्जनाका आफन्त धीरेन्द्र थापाले भने, 'त्यो जग्गामा हामीले उद्योग स्थापना गर्न लागेकाले बस्ती र टयुबवेल हटाउने अवस्था आएको हो ।'
सिर्जनाका बुबा रामु थापाले छोरी फिर्ता ल्याइदिन आग्रह गर्दा नमानेपछि समस्या भएको बताए । 'हामीबीच दाजुभाइको सम्बन्ध थियो, दुवै घरमा आउनेजाने थियो,' उनले भने, 'मेरो छोरी भगाएर लगेपछि खोजेर ल्याउन भन्यौं तर यिनीहरू मान्दैनन् ।' थापा परिवारले ऋषिदेव परिवारलाई छोरी बेचिदिएको आरोप लगाएको छ ।
प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ २१:२४